Iindawo eziBalaseleyo zeCrypto Staking kaJanuwari 2022 | Funda ngokuPheleleyo uPhononongo lwezoRhwebo ezi-2!
Iindawo eziGcweleyo zokuHanjiswa kwe-Crypto-Amaqonga amaNqanaba aphezulu e-Crypto ngo-2021
Kuhlala kusithiwa ekuphela kwendlela yokwenza imali kutyalo-mali lwe-imali yedatha kuxa ixabiso lesikiti lenyuka kwindawo yentengiso evulekileyo. Nangona kunjalo, oku akunakuba kude nenyaniso. Kungenxa yokuba amaqonga aliqela akwi-intanethi ngoku avumela wena ukuba ufumane umvuzo ngokwenza 'ukubamba' iiasethi zakho zedijithali.
Iithokheni ozibeke phambili ziya kuba negalelo ekusebenzeni kwenethiwekhi ye-blockchain- njengoko oku kunceda ekuqinisekiseni ukuthengiselana okuxhaswe yindlela yokuQinisekiswa kweStake (PoS). Kwelinye icala, uyakufumana inzala ngesixa esilinganayo nenani leethokheni ogqiba ekubeni uzibambe.
Kwesi sikhokelo, sijonga kwakhona Eyona ndawo ibalaseleyo ye-crypto staking ye-2021 kwaye uhambe ngenkqubo yokuqalisa phantsi kwemizuzu eli-10.
Ezona ndawo ziBalaseleyo ze-Crypto-Ubume
Nalu ushwankathelo olukhawulezayo lwezona ndawo zibalaseleyo ze-crypto ze-2021.
eToro: Ngokubanzi Eyona ndawo ilungileyo yokuGcina i-Crypto
Kucoin: Utshintshiselwano oludumileyo lwe-crypto ngezivuno ezikhuphisanayo
Binance: Utshintshiselwano oluphezulu kunye neninzi yeengqekembe zemali ezixhaswayo
Ibhlokhi: Fumana umvuzo kwiingqekembe zakho zemali mboleko ye-crypto
MyContainer: Ingcali ye-crypto staking site
Qalisa ukubamba ngoku
I-67% yeeakhawunti zabathengi zithengisa imali xa kuthengiswa iiCFDs kulo mboneleli
Uqala njani ukubamba i-Crypto kwimizuzu emi-5
Ukuba awunalo ixesha lokufunda eli phepha okwangoku-landela amanyathelo akhawulezileyo omlilo apha ngezantsi ukuze uqalise ngeyona ndawo ibalaseleyo ye-crypto kwisithuba esingaphantsi kwemizuzu emihlanu!
Inyathelo 1: vula iakhawunti nge-eToro- I-eToro-ngumrhwebi olawulwa kwi-Intanethi onabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-20, yeyona ndawo ibalaseleyo yokubeka imali emarikeni. Qalisa ngale broker ngokuvula iakhawunti kwaye ulayishe ikopi yesazisi sakho.
Inyathelo 2: Yongeza i-Crypto - Uya kudinga ukuba ube neethokheni ezithile ze-crypto kwiakhawunti yakho ye-eToro ngaphambi kokuba uqale ukufumana umvuzo. Ukuba awunayo iithokheni okwangoku, ungazithenga kwi-eToro ubuncinci be- $ 25 ngekhadi ledebhithi / lekhadi letyala, i-e-wallet, okanye ugqithiselo lwebhanki.
Inyathelo 3: Zuza umvuzo Eyona nto intle malunga nokusebenzisa i-eToro kukuba awunyanzelekanga ukuba wenze nantoni na ukuqala ukufumana umvuzo. Ngokuchasene noko, kufuneka ubambe amathokheni kwisipaji sakho se-eToro!
Njengoku kungasentla, ungashiya iithokheni zakho ze-crypto kwisipaji sakho se-eToro ixesha elide unqwenela. Ngokwenza njalo, uya kuqhubeka nokonwabela imivuzo eqhubekayo!
Phawula: Kukho izinto ezithile ekufuneka uzithathele ingqalelo xa usebenzisa i-eToro ukubamba-njengobuncinane benani leentsuku zokufaneleka kunye nohlobo lwee-asethi zedijithali ezixhaswayo. Sigubungela oku ngokweenkcukacha kungekudala.
Eyona ndawo i-Crypto Staking Site-Uluhlu lwee-Platform ze-Crypto
Ukukhetha eyona ndawo ibaluleke kakhulu ye-crypto kwiimfuno zakho kubalulekile. Emva kwayo yonke loo nto, zininzi iimetrikhi ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuqhubeka-njengokuthi yeyiphi imali yedijithali indawo ekuvumela ukuba ubambe kuyo, zingaphi iintsuku ekufuneka ubambe ngazo umqondiso ukuze ulungele, kwaye yeyiphi i-APR.
Ukuthatha zonke ezi zinto ziphambili uzithathele ingqalelo - apha ngezantsi uyakufumana ukhetho lweyona ndawo ibalaseleyo yokubeka i-crypto ye-2021 nangaphaya.
1. I-eToro-Esona sitayile siBalaseleyo se-Crypto se-2021
I-eToro yeyona ndawo intle yokubambisa i-crypto kwindawo yentengiso yemikhosi egcweleyo yezizathu eziphambili. Okokuqala nokuphambili-awunyanzelekanga ukuba ukhathazeke ngokuba semthethweni kweli qonga- njengoko iToro ilawulwa kakhulu. Oku kubandakanya ilayisensi ene-FCA (UK), ASIC (Australia), kunye neCySEC (eCyprus )- kunye nokugunyaziswa okuvela kwi-SEC nakwi-FINRA (US). Kwaye, iqonga beliqala ukusebenza ukusukela nge2007 kwaye ngoku lisebenza kubathengi abazizigidi ezingama-20 kwihlabathi liphela.
Ngokuyintloko, i-eToro ngumrhwebi okwi-intanethi ekuvumela ukuba uthenge amawaka esitokhwe sekhomishini kunye nee-ETFs. Oku kuhambelana nokuthengiswa kwi-forex, iimveliso, ii-indices, kwaye kunjalo- i-crypto. Ngokwenkonzo yayo yokuma, i-eToro ngoku ibonelela ngezi zinto zimbini kwidijithali. Oku kubandakanya iCardano (ADA) kunye ne-TRON (TRX). Zombini iiasethi zedijithali zinomtsalane kwipesenti yomvuzo ephezulu efikelela kwiipesenti ezingama-0 zesivuno esivelisayo senyanga. I-Toro iceba ukongeza ezinye iimali zemali kwinkonzo yayo ye-staking, kunye ne-Ethereum (ETH) elandelayo emgceni.
Eyona nto siyithandayo malunga nale nkonzo ye-staking-staking service kukuba akudingeki wenze nantoni na ukuqala ukufumana umvuzo. Ngokuchasene noko, ukuba nje ubambe ingqekembe exhaswa ngemali kwisipaji sakho se-eToro-ulungile ukuba uza kuhamba. Ngale nto ithethwayo, awuyi kufumana mbuyekezo kude kube ngumhla we-8 kunye nowe-10 wokubamba i-TRON kunye neCardano, ngokwahlukeneyo. Ukuba awunayo imali yedijithali exhaswayo, i-eToro ikuvumela ukuba uthenge ezinye iithokheni kwindawo encinci ye- $ 25. Akukho mfuneko yokuba uhlawule enye into ngaphandle kokunwenwa (iqala nge-0.75%).
Njengomrhwebi olawulwayo, i-eToro ixhasa idipozithi yemali ye-fiat. Oku kubandakanya ukubhatalwa kunye namakhadi etyala, ukuhanjiswa kweakhawunti yebhanki, kunye nee-wallet ezifana ne-Paypal. Umrhwebi uhlawulisa iipesenti ezi-0.5 kwiidipozithi ze-fiat kunye ne- $ 5 kurhwebo. Ukuba ujonge ukwahluka kwipotifoliyo yakho, i-eToro ibonelela ngeemfumba zezinye iimali zedijithali. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwiBitcoin, iAAVE, kunye neDecentraland ukuya kwiLitecoin, i-EOS, kunye ne-Ethereum Classic. Unokwenza nokuba usebenzise isixhobo seKopi yokuThengisa ukonwabela umvuzo ongenanto. Kungenxa yokuba ngokukhetha umrhwebi ophumeleleyo we-eToro ukuba akope, uya kuthi uzibonakalise kutyalo-mali lwabo njengokuthanda.
Eyona ndawo ibalaseleyo yokubeka i-crypto kwimarike
Zuza imbuyekezo ngokubamba nje ingqekembe exhaswa
Ukufezekisa ii-newbies kunye nolawulo olukhulu
Ulawulo kunye nokungasebenzi kwentlawulo emva kweenyanga ezili-12 kungekho zorhwebo
I-67% yabatyali zimali abathengisayo baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD kunye nalo mboneleli
Ezinye iiSayithi ze-Crypto Staking zokuZithathela ingqalelo
Nangona safumanisa ukuba i-eToro yeyona ndawo ibalaseleyo yokubeka i-crypto kwintengiso-iqonga lisenokungabi lelawo wonke umntu. Ukuba le yimeko yakho kunye neenjongo zakho zokuma- mhlawumbi jonga elinye lamaqonga alandelayo adweliswe apha ngezantsi.
Kucoin: Utshintshiselwano oludumileyo kwi-Intanethi kunye nabathengi abangaphezulu kwezigidi ezingama-20. Intloko ngaphaya kwesebe leqonga 'Zuza' ukonwabela ingeniso engenziwanga ngokuma kwi-staking. Iithokheni ezinjenge-USDT zinokutsala inzala yonyaka engaphezulu kwe-11%.
BinanceIqonga lokuma emva kwalo mboneleli lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-imali yedatha kwihlabathi elinabathengi abangaphezu kwezigidi ezili-100. Isebe le-Binance staking likhulu kakhulu - kunye neendlela ezikhethiweyo kunye neziguquguqukayo ezikhoyo kwiimali ezininzi ezixhaswayo. Ithokheni yedijithali ye-Binance-BNB, itsala isivuno esingaphezulu nje kwe-9% ngonyaka.
IbhlokhiEli qonga ligxile kwimali mboleko ye-crypto. Kananjalo, awuyi kuyenza ngezobugcisa beka iimpahla zakho zedijithali. Ngokuchasene noko, uya kuba uboleka imali yakho ekubanjiswe ngayo i-crypto kubabolekisi besithathu ababeka isibambiso sokufumana imali mboleko.
MyContainer: Ukuba ujonga iqonga eligxile ngokukodwa kwi-crypto staking- unokufuna ukukhangela iMyContainer. Lo mboneleli uxhasa uluhlu olubanzi lweengqekembe zemali-kubandakanya ukuthandwa kweeWave, ColossusXT, kunye ne-Energi. Imivuzo e-MyContainer iyakhuphisana- kodwa ekugqibeleni iya kuxhomekeka kwizinto zexabiso ledijithali ezichaphazelekayo.
Njengesiqhelo, qiniseka ukuba wenza owakho umsebenzi wasekhaya ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na kwezi ndawo zingasentla ze-crypto.
Indlela yokufumana ezona ndawo ziBalaseleyo ze-Crypto
Ukuze ufumane ezona ndawo zibalaseleyo ze-crypto ezibonelelwa lushishino-kuya kufuneka wenze umsebenzi wesikolo. Zininzi iindlela zeemetriki zokujonga xa usiya kwinkqubo yophando - esizichaza ngakumbi ngezantsi.
Iingqekembe zeStaking ezixhaswayo
Okokuqala nokuphambili, kufuneka ujonge iwebhusayithi yomboneleli ukuze ubone ukuba zeziphi iimali ezixhaswayo ezixhaswayo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba unengqekembe ethile engqondweni onqwenela ukuyifaka-kufuneka uqinisekise ukuba iqonga liyayibonelela.
Unokwenza oku ngaphandle kokufuna ukuvula iakhawunti kunye ne-staking site-ke eli nyathelo lilula.
Nje ukuba ufumanise ukuba indawo oyikhethileyo iyayixhasa ingqekembe oyikhethileyo, kuya kufuneka uphonononge ukuba zeziphi izivuno ezikhoyo. Kungenxa yokuba akukho maqonga mabini afanayo ngokumalunga noku.
Umzekelo, unokufumana ukuba umboneleli omnye ubonelela nge-11% kwisetetet staking, ngelixa kwelinye iqonga oku kunokuba sezantsi nge-7% kuphela. Ekugqibeleni, uya kufuna ukukhetha umboneleli onikezela ngesona sivuno siphezulu semali yakho ethile ukuze ukwazi ukwandisa ukubuyela kwakho.
Ngoku ukuba uyazi ukuba yeyiphi imveliso eneqonga elibekiweyo kwingqekembe yakho-kuya kufuneka ke ujonge imigaqo leyo. Oko kukuthi, unokucelwa ukuba utshixe ingqekembe yakho yemali ixesha elincinci. Ukuba kunjalo, ngekhe ukwazi ukufikelela kwiingqekembe zakho zesistim de kudlule ixesha lokuhlawulelwa.
Amanye amaqonga abonelela ngolungelelwaniso ngakumbi lokuma. Oku kuthetha ukuba unako ukurhoxisa iimali zakho kwi-staking platform nanini na ixesha. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ulindele ukuba i-APR ibe sezantsi xa ukhetha isicwangciso esime bhetyebhetye.
Imirhumo / iikhomishini
Nditsho nezona ndawo zibalaseleyo zokubeka i-crypto kolu shishino zikwezoshishino ukwenza imali. Kananjalo, kuya kufuneka ulindele ukuhlawula umrhumo wohlobo oluthile lokusebenzisa inkonzo yokuma eqongeni. Kwiimeko ezininzi, isiza siya kuthatha ikhomishini encinci kwimivuzo yokufumana umvuzo.
Umzekelo, ukuba umboneleli ubiza i-10% kwaye kuyo yonke inyanga wenza i-crypto-elinganayo ne- $ 500- uya kugcina i-450 yeedola ngelixa iqonga lifumana i-50 yeedola.
Ukhuseleko kunye neTrust
Ayithethi nto ukuba kuya kufuneka wenze umsebenzi wakho wasekhaya kwi-crypto staking provider ngaphambi kokuba uhlukane nayo nayiphi na imali yakho yedijithali. Esi sesinye sezizathu ezininzi zokuba sicinge ukuba i-eToro yeyona ndawo ibalaseleyo yokubeka i-crypto kwintengiso-njengoko inkampani yomrhwebi ilawulwa yi-FCA, i-CySEC kunye ne-ASIC.
Umrhwebi naye uyavunywa yi-SEC kunye ne-FINRA. Ngenxa yoko, unokuqiniseka ukuba iingqekembe zakho zesiteki zijongwa kakuhle kwi-eToro. Ngale nto ithethwayo, uninzi lweziza ze-crypto staking azilawulwanga kwaphela-ke ikomkhulu lakho lihlala lisemngciphekweni.
Uqala njani nge-Crypto Staking
Kwinxalenye yangaphambili yeli phepha, sinikeze isikhokelo somlilo ngokukhawuleza malunga nendlela yokuqalisa nge-crypto staking. Nangona kunjalo, ukuba ungumqali opheleleyo kumxholo we-staking-oku kunokuba kungonelanga ngokwaneleyo kuwe.
Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uza kufumana indlela eneenkcukacha zokuba uqalise njani ngeyona ndawo ibalaseleyo ye-crypto ye-2021-eToro.
Inyathelo 1: vula iakhawunti ye-eToro
Ukuze uxhamle kwinkonzo ye-eToro crypto staking-kuyakufuneka uqale uvule iakhawunti. Kwakhona, oku kungenxa yokuba inkampani yomrhwebi ilawulwa kakhulu-ke ayinakuvumela utyalomali olungaziwayo.
Iindaba ezimnandi zezokuba ungagqibezela inkqubo yokuvula ukuya kuthi ga esiphelweni kwimizuzu engaphantsi kwemihlanu. Kuqala, cofa indawo ethi 'Joyina ngoku' kwaye ulandele imiyalelo ekwi-screen ngokufaka iinkcukacha zakho. Kuya kufuneka unikezele ngeenkcukacha zakho kwaye wenze igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Inyathelo 2: KYC
Nangona inkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho) inokuba yintlungu, e-eToro, amaxwebhu akho aya kuqinisekiswa kwangoko. Kananjalo, konke okufuneka ukwenze kukufaka ngokukhawuleza ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente kunye nobungqina obufanelekileyo bexwebhu ledilesi elikhutshwe kwinyanga ezi-3 ezidlulileyo.
Uninzi lwabantu lukhetha isitetimenti sebhanki okanye ityala elisebenzisekayo- kwaye iikopi zedijithali zilungile.
Inyathelo 3: Thenga i-Crypto ($ 25 ubuncinci)
Ekuphela kwendlela onokufumana ngayo umvuzo we-staking kutyalo-mali lwakho lwedijithali kwi-eToro kukubamba amathokheni kwipotifoliyo yakho ephambili yewallet. Ngamafutshane, oku kuthetha ukuba kuyakufuneka uthenge imali ethile kwi-eToro ukuba awukenzi oko. Iindaba ezimnandi zezokuba isigxina esincinci yi $ 25 kuphela kurhwebo ngalunye kwaye kufuneka uhlawule ukusasazeka kuphela.
Oku kwenza ukuba i-eToro ibe yenye yezona zitshiphu zibiza kancinci kubarhwebi kwisithuba. Ngapha koko, unokuhlawula ukuthengwa kwe-cryptocurrency yakho nge-debit / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet (kubandakanya iPaypal), okanye iakhawunti yebhanki. Ngokungafaniyo neCoinbase- ehlawulisa i-3.99% kwintlawulo yedebhithi / yekhadi letyala- kwi-eToro, oku kuyakuhlawula nje nge-0.5%. Ngapha koko, ukuba uhlala eMelika kwaye ubeka imali kwi-USD, le mali ye-0.5% iyarhoxiswa.
Inyathelo 4: Qalisa ukubamba i-Crypto
Njengoko besitshilo ngaphambili, awunyanzelekanga ukuba wenze nantoni na ukuqala ukufumana umvuzo kwi-eToro. Endaweni yoko, oku kuya kukhaba ngokubamba ingqekembe efanelekileyo.
Ukuphinda wenze oku, okwangoku kugubungela iCardano kunye ne-TRON- kwaye inani elithile leentsuku kufuneka lidlule ngaphambi kokuba imbuyekezo eqokelelweyo iqale ivelise kwiakhawunti yakho. Ezi ziintsuku ezili-10 zeCardano kunye neentsuku eziyi-8 ze-TRON.
Ngalo lonke ixesha ubambe ingqekembe ye-staking kwiakhawunti yakho ye-eToro, uya kuqhubeka nokufumana umvuzo. Unako, nangona kunjalo, ukhupha imali yakho yotyalo-mali yedijithali nangaliphi na ixesha. Xa usenza njalo, awusayi kuphinda ufumane umvuzo.
Ezona ndawo ziBalaseleyo ze-Crypto: ukuGqiba
Esi sikhokelo siphonononge ezona ndawo zibalaseleyo zokubeka imali kwimarike namhlanje. Ngelixa kukho amaqonga aliqela ekufuneka siqwalasele, sifumanise ukuba i-eToro kunye nenkonzo yayo ye-staking yemveli ime phakathi kwesihlwele.
Eli qonga liphezulu lilawulwa kakhulu, lisetyenziswa ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-20, kwaye linodumo olukhulu kwibala lemali yedijithali. Siyayithanda inyani yokuba ungafumana umvuzo we-staking ngokufumana ingqekembe exhaswayo-efanelekileyo ye-newbies.
Yeyiphi eyona ndawo intle yokubambisa i-crypto?
Sifumanise ukuba i-eToro yeyona ndawo ibalaseleyo yokubamba i-crypto. Eli qonga lilawulwa kakhulu-ke akufuneki ukhathazeke ngokhuseleko lwemali yakho yedijithali. Unokufumana umvuzo we-staking kuzo zombini i-TRON kunye neCardano ngokubamba nje ithokheni efanelekileyo kwisipaji sakho se-eToro. Iingqekembe zemali ezingaphezulu ziya kongezwa kwiqonga le-eToro kungekudala.
Yintoni i-crypto staking?
Ukuma kwe-Crypto kubonelela ngendlela yokufumana nje inzala kwimali oyisebenzisileyo yedijithali. Kungenxa yokuba iithokheni zakho zisetyenziselwa ukunceda ukuqinisekisa intengiselwano kwinethiwekhi yesiQinisekiso.
Kude kube nini ufuna ukutshixa i-crypto xa umile?
Oku kuyakuxhomekeka kwinani lezinto-ezinje ngesiza sokugcina i-crypto osisebenzisayo. Amanye amaqonga anikezela ngeakhawunti eguqukayo ekuvumela ukuba urhoxe amathokheni akho nangaliphi na ixesha. Ngelixa ezinye zifuna ukuba utshixe amathokheni ubuncinci beentsuku.
Ngaba i-crypto staking esemthethweni?
Ewe, i-crypto staking ibonelela ngendlela esemthethweni yokufumana umvuzo rhoqo kwii-cryptocurrensets zakho. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ixabiso lethokheni nganye linokuhla kwintengiso evulekileyo. Kananjalo, nangona unokufumana inzala, ungaphulukana nemali ngokwexabiso elipheleleyo lotyalo-mali lwakho.
Yeyiphi eyona ngqekembe ibalaseleyo ye-crypto?
Akukho ndlela ilula yokuphendula lo mbuzo, njengokuthetha nje, ingqekembe izinzile ngakumbi, kokukhona ivelisa kancinci ngokubamba. Umzekelo, unokufumana ithokheni esandula ukwenziwa yedijithali enikezela ngesivuno esingaphezulu kwe-100% ngonyaka. Kodwa, ukuba ukhetha ithokheni emiselweyo njenge-Ethereum, uya kufumana kancinci kakhulu. Kananjalo, oku kulandela imeko yakudala yomngcipheko kunye nomvuzo.